यस्तो छ, चुनावसम्बन्धी माओवादीको निर्णय « Jana Aastha News Online
यस्तो छ, चुनावसम्बन्धी माओवादीको निर्णय
प्रकाशित मिति : ८ माघ २०७८, शनिबार १५:४५
आज बिहान कोटेश्वर पेरिसडाँडास्थित मुख्यालयमा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकले विशेषगरी आगामी स्थानीय,प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्बन्धमा छलफल र निर्णय गरेको छ । सरकारमा आवद्ध पाँचदलीय गठबन्धनमा निर्वाचनबारे गहन छलफल गर्ने एजेण्डा अघि सारेपछि माओवादीले आज बिहान बैठक डाकेको हो ।
निवर्तमान स्थायी समितिको बैठकमा निर्वाचनको एजेण्डामाथि छलफल गरिएको हो । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सकेसम्म संविधानले तोकेबमोजिम सबै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नेबारेमा सरकारलाई सुझाव दिने सहमति भएको हो ।
‘स्थानीय चुनाव सार्ने भन्ने नै होइन । कसले तोकेको थियो र सार्नलाई ?सार्नलाई त यसअघि मिति तय गरिएको हुनुपर्यो नि ! ’
बैठकमा सहभागी एक जना नेताले भने, ‘स्थानीय चुनाव सार्ने भन्ने नै होइन । कसले तोकेको थियो र सार्नलाई ? सार्नलाई त यसअघि मिति तय गरिएको हुनुपर्यो नि ! ’ उहाँका अनुसार आगामी तीनै तहको चुनावलाई मिलाएर डेट फिक्स गर्ने भन्नेमा मोटामोटी सहमति भएको छ । बैठकले प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोकिएको समयमा गर्नेमा जोड दिएको छ ।
यसअघि स्थानीय तहको निर्वाचन २०७४ को बैशाखदेखि असोजसम्म विभिन्न मितिमा भएको थियो । एउटै मितिमा निर्वाचन नभएकाले ठ्याक्कै पाँच वर्ष पुगेको मिति कुन समयलाई मान्ने भन्ने समस्या परेको देखिन्छ । अन्यत्र मुलुकमा विभिन्न मितिमा निर्वाचन गरे पनि परिणाम घोषणा एउटै मितिमा गर्ने गरिएकाले त्यस्तो अड्चन देखिँदैन । हाम्रो सन्दर्भमा भने फरक मितिमा निर्वाचन र लगत्तै परिणाम घोषणा गर्नाले पाँच वर्षको म्याद गणनामा झमेला भएको बताइन्छ ।
यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्थानीय चुनाव तत्काल नगर्ने पक्षमा हुनुहुथ्यो । तर पछिल्ला दिनमा सकिन्छ भने बैशाख वा जेठमा निर्वाचन गरौं भन्न थाल्नुभएको काँग्रेसीहरुले बताएका छन् ।
माओवादीको आज बिहानको बैठकमा मोटामोटी एकै चरणमा निर्वाचन गरौं भन्ने लाइनमा कुरो भएको छ । सकिएन वा सम्भव भएन भने एकाध महिनाको अन्तरमा चुनाव गरौं भन्ने हिसाबले बैठकमा सहमति गरिएको स्रोतको दाबी छ । ‘पहिले संघ र प्रदेशको निर्वाचन गरौं,संविधान र कानुनलाई मिलाएर भए पनि स्थानीय तहको चुनाव गरौं,’ भन्नेमा माओवादीमा सहमति भएको बताइन्छ ।
#नेकपा माओवादी केन्द्र
को हुन् हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा विजयी मीना लामा ?
स्वयम्भू पछाडि काँग्रेसको जुलुस र आमसभा
मुख्यसचिवलाई भेट्न प्रधानसेनापति सिंह दरवारमा
झापामा कत्ति पनि देखिएन कलमको असर
दलाई लामाका सांसदहरु काठमाडौंमा देखिए
बलात्कारीलाई गौंडा गौंडामा खबरदारी
भूतपूर्व डीएसपीले मेयरमा बाजी मारे
काठमाडौंमा आधा मतगणना : सूर्यभन्दा लौरो १४ हजारले अघि
मेयर जिते पनि विराटनगरमा काँग्रेसको शक्ति खस्क्यो, माओवादी शून्य